Serivisy ho an'ny mpanjifa tsotra | Martech Zone
Serivisy ho an'ny mpanjifa tsotra
Asabotsy, Aogositra 26, 2006 Talata, Septambra 1, 2015 Douglas Karr
Mino izany na tsia, tsy foana ny Marketing, Blogs, Messaging Viral sns sns. Manana famantaranandro Fossil izay akaiky sy malalako aho satria novidian'ny zanako ho ahy fitsingerenan'ny andro nahaterahany. Manantena aho fa haharitra mandrakizay izany. Herintaona na roa maharitra ny bateria. Tapitra ny bateriko roa andro lasa izay saingy nanao ny famantaranandro foana aho. Toa moana ilay izy nefa nataoko satria rehefa mijery azy aho dia mieritreritra ny zanako… ary raha mijery foana ny fiambenana dia nijanona aho, tadidiko ny hahazo bateria.
Ny rihana ambany avy amin'ny asako dia Windsor Jewellers (Lafiny andrefan'ny Meridian atsimo amin'ny faribolana). Tsy mbola niditra an-tongotra tao mihitsy aho (hey… Dada tokan-tena 38 taona aho, inona no ilako firavaka?) Fa nanapa-kevitra kosa aho raha hametraka ho ahy ilay bateria.
Rehefa nandeha teo am-baravarana aho dia nisy vehivavy mahafinaritra nanatona ary nanontany raha afaka manampy ahy izy. Notantaraiko azy ny momba ilay famataranandro ary nalainy tamiko izany ary natolony ahy tamin'ny teknisianina mpiambina (?) Izay nanana birao teo amin'ny fivarotana. Tao anatin'ny minitra vitsy (matotra) dia niditra bateria vaovao izy, nametraka ny fotoana, nanadio ny famantaranandro, ary natolony ahy. Nitafy iray tamin'ireny solomaso firavaka mahafinaritra ireny izy ary nifindra tokoa ara-bakiteny ka zara raha hitako ny fomba nanaovany azy. Vao avy nanam-potoana namaky lahatsoratra navoaka tamin'ny rindrina aho izay nirehareha fa ireo olona izay nifindra avy tany Indianapolis dia mbola matoky an'i Windsor ihany mba hanamboatra ny famantaranandrony sy ny fiambenany. Tsy manana ahiahy aho.
Mety hampivarotra anao ny varotra, fa ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara kosa tsy hitandrina izany.
Tao anatin'ny minitra vitsy dia nandoa ny sarany aho (vola lehibe $ 9, misy bateria) ary nivoaka ny fivarotana. Ilay vehivavy nanosotra ahy nangataka ahy hiverina tsy ho ela. Wow.
Tsy azoko antoka hoe rahoviana aho no mila mpanao firavaka indray. Na dia tsy izany aza aho dia fantatrao hoe aiza ho aiza aho herintaona manomboka izao rehefa maty ny bateriko famantaranandro!
Tags: Serivisy ho an'ny mpanjifaIndianapolismpanefy firavakasolomaso firavakafiravakampanao firavaka windor
ASLP? Nomena isa ireo andron'ny fanafohezana!
Halako ny bilaogera